တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR နှင့် မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်းမှ တိမ်တိုက်များ အခြေအနေ « MMWeather Information BLOG
« အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR – အိုကီနာဝါကျွန်းအား စ ၍ တိုက်ခတ်နေပြီ အရွယ်ကြီးလာသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR »
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR နှင့် မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်းမှ တိမ်တိုက်များ အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on June 3rd, 2012
ဇွန်လ ၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီတွင်တွေ့မြင်ရသည့် မုန်တိုင်း မျက်စေ့ထင်ရှားစွာ ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR(04W – ဖိလစ်ပိုင်အမည် AMBO)နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းမှ စတင်ကာ မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်း တစ်ခုလုံးဖုံးလွှမ်းနေသည့် တိမ်တိုက်ကြီးကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေသည့် MAWAR(AMBO) သည် လာမည့် ၁၂ နာရီအတွင်း ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း TSR မှ ခန့်မှန်းထားပါသည်။
Typhoon MAWAR (AMBO) maintains its intensification trend and is likely to becomeaCategory3storm later tonight. Currently moving NE-ward in the direction of the Southern Islands of Japan.
Maximum Sustained Winds (1-min. avg) have increased to near 165 km/hr (90 knots) with higher gusts. MAWAR is expected to reach Category3status later tonight or early Monday, before losing strength sometime Tuesday. It will start to transition into an Extratropical Cyclone by Wednesday. (T2K)
မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်၊ ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့တို့မှ တစ်ဆင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်သို့ တိမ်တိုက်များ အရှေ့ဘက်နှင့် အရှေ့မြောက်ဘက်မှ ရွေ့လျားဝင်ရောက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဤသို့ရွေ့လျားဝင်ရောက်လျှက်ရှိသည့် တိမ်တိုက်များသည် မြန်မာ့ကမ်းရိုးတမ်းတစ်ခုလုံးနီးပါးကို ဖုံးအုပ်လျှက်ရှိပါသည်။
Typhoon MAWAR: Current Data
Cat 1 or Above
3 Jun, 6:00
0 hrs 19.4 N
3 Jun, 18:00
12 hrs 20.8 N
To 12 hrs
4 Jun, 6:00
24 hrs 22.7 N
4 Jun, 18:00
36 hrs 24.6 N
To 36 hrs
5 Jun, 6:00
48 hrs 26.7 N
To 48 hrs
6 Jun, 6:00
72 hrs 30.7 N
To 72 hrs
7 Jun, 6:00
96 hrs 36.3 N
To 96 hrs
04W MAWAR – NRL data at 1230 MMTime
03 Jun 2012 0600Z
Location: 19.4 125.5
Winds: 95 knots (Category 2)
Central Pressure: 952 hPa
ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ, မုန်တိုင်းသတင်း 04W, 95W, AMBO, FOUR, MAWAR, တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း, ပစိဖိတ်အနောက်မြောက် « အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR – အိုကီနာဝါကျွန်းအား စ ၍ တိုက်ခတ်နေပြီ အရွယ်ကြီးလာသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR »
« အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR – အိုကီနာဝါကျွန်းအား စ ၍ တိုက်ခတ်နေပြီ အရွယ်ကြီးလာသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum